कोरोनाको कहरमा सरकारले के गर्यो होइन, आफ्नो कर्तव्य निभाउने होः भुवन आचार्य – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ जेष्ठ १८, आईतवार १५:५९
रामेछापको सुनारपानी गाविस वडा नम्बर ९(हाल मन्थली नगरपालिका ५) मा जन्मिएका भुवन आचार्य अनेरास्ववियूका नेता हुन् । अरुले पेशानै राजनीतिलाई बनाउँछन् तर आचार्यले भने राजनीतिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवसाय बनाएका छन् । राजनीति र त्योसँगै अर्को व्यवसायसँगसँगै लैजानुपर्छ भनेर उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आफ्नो व्यवसाय बनाएका हुन् ।
उनले काठमाडौँमा ‘टाइगन मेडिसियन सप्लायर्स’ संचालन गरिरहेका छन् । उनी यसको निर्देशक हुन् । सानो उमेरमा व्यवसाय संचालन गर्ने हैसियतमा पुगेकोमा उनी गर्व गर्छन् । उनले औषधि आपूर्ति मात्र गर्दैनन् त्यसबाट आएको नाफाको केही प्रतिशत रकमले देशका विभिन्न स्थानमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दै आएका छन् । यसरी परोपकारी काम गर्दै आएका आचार्य यो लकडाउनमा घर नबसी दैनिक औषधि आपूर्तिमा जुटेका छन् । यसैसन्दर्भमा आचार्यसँग कुराकानीको सम्पादित अंशः
लकडाउनको बेला ज्यानको परबाह नगरी दैनिक हिंडिरहनुभएको छ नि ।
हेर्नुस् हाम्रो त व्यवसाय नै यस्तो हो कि आफूलाई भन्दा अरुलाई बचाउने । हामी औषधि व्यवसायी नै घरमा बस्यौं भने विरामीको हालत के होला ? त्यसैले औषधि आपूर्तिमा कमी हुन नदिन हामीहरु दिनरात, लकडाउन विदा केही नभनी खट्छौं ।
यसरी दैनिक खट्नुपर्ने पेशाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
मैले यो औषधि क्षेत्रमा काम गरेको एक दशक भयो । सन्तुष्टिको भनेको अनुभव हुने कुरा रहेछ । यो क्षेत्र भनेको सेवाको क्षेत्र हो । त्यसैले अरुको सेवा गर्न पाउँदा जति सन्तुष्टि केही नहुने रहेछ । मैले वर्षमा पाँच ६ स्थानमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि संचालन गर्दै आएको छु , त्यहाँ आउने विरामी बुबाआमाहरुलाई निःशुल्क सेवा दिन पाउँदा यति खुसी हुन्छ त्यसको कुनै मापन नै गर्न सक्दिन ।
कोरोनाको कहरमा तपाईंहरुको भूमिका के हो नि ?
हामी औषधि व्यवसायीहरुको प्रतिबद्धता नै छ कि राज्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट पर्यो भने दिलो ज्यान दिएर लाग्ने । कोरोनाका कारण यो हदसम्मको संकट आइपर्ला भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन् । अहिले विश्व नै लकडाउनमा छ तर हामी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै नियमित औषधि आपूर्तिमा खटिराका छौं । हामी पनि अरुजस्तै घरमा बस्यौं भने के हुन्छ हालत ? त्यसैले औषधिको कमी नहोस् भनेर कर्तव्य पालना गर्दै दिनरात लागेका छौं ।
तपाईंहरु यसरी खटिरहनु भएको छ सरकारले तपाईंहरुको सुरक्षाका लागि के गरेको छ नि ?
सरकारले के गर्यो गरेन भन्दा पनि हामीहरुको कर्तव्य के हो भन्ने ठूलो कुरा हो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ऋण व्याजमा केही सहुलियतको कुरा ल्याएको छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । व्यक्तिगत सुरक्षाका कुरा गर्ने हो भने हामी सडकमा हिंड्नु पर्छ तर यसरी हिंड्दा हामी आफैं सुरक्षित भएर हिंडने हो र हिंडिरहेका छौं । काठमाडौंको हकमा कुरा गर्दा नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं जिल्ला शाखाले व्यवसायी र त्यस मातहतमा काम गर्ने सबैको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यसैले म भन्छु सरकारले गरेन भन्दा पनि यो बेला हामीले आफैं अग्रसर भएर गर्ने भन्ने हो ।
अनि बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको कालाबजारीको कुरा आएको त कति कारबाहीमा पनि परेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
हेर्नुस् सबै मानिसको रगत रातै हुन्छ तर किन उनीहरु कुनै कालो अनुहारको कुनै गोरो कुनै अर्को रङको हुन्छ त ? अनि किन बानी व्यवहार फरक हुन्छ त ? हो बजारमा मानिस विभिन्न थरीका छन् । सरकारले त्यस्तै हुन्छ भनेर नीति नियम बनाएको छ नि । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्यो नि त । कारबाहीमा पनि परेका छन् । हामीहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी औषधि उत्पादक होइन विक्रेता हौं । कम्पनीबाट आएको औषधि हामीले बजारमा पठाउने हो । जसले जहाँबाट बिगार गरेको छ त्यहीँं कारबाही गर्यो भने तपाईंले भने जस्तो आगामी बजारमा खबर सुन्नु नपर्ला ।
Spread the loveकाठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २२६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झापामा दुई जना, नवलपरासीमा ३ जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा ४३ जनामा पोजेटिभ आएको छ। जसमा अधिकांश दैलेखका छन्। प्रदेश अस्पताल तथा पशुपंक्षी प्रयोशाला सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखको नारायण […]